Supporter Mapeji fenicha Outdoor Furniture High End Fenicha Vakuru Musha Bindu Jhula Swing Chigaro Kune Balcony
10 Sets Bata Mutengesi
Yakasvibiswa simbi + PE rattan + isina mvura kunze Fabric
I. Chigadzirwa Description
Product Name High End Fenicha Vakuru Musha Bindu Jhula Swing Chigaro Kune Balcony
Item Kwete TF-9716
zvinhu Peti rattan, Simba rakabatanidzwa Simbi, Waterproof repellent machira
zera fsaizi yakaremara 120 * 120 * 200cm, Sachigaro size 148 * 70 * 124CM
nhuri Mabhegi akarukwa, 4 pcs mapakeji / akaiswa
Kutsvaga simba 28pcs / 20GP, 72pcs / 40HQ
dhirivahari 15 ~ 20 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti yeimwe 40 "HQ
1. kurongeka nemidziyo yakazara: 28pcs / 20GP, 72pcs / 40HQ
2. Isu tinogamuchirawo 1 chidimbu kana mumwe munhu akazvitora kukambani yedu.
II. Maitiro Akawanda
1. isu tiri vekugadzira yekutanga nefekitori yedu yega kweanopfuura makore gumi chiitiko ichiita rattan machirares ekunze, zvigadzirwa zveruoko rattan, zvinogonesa isu kunaka kwemhando yekudzora, nguva yekutumira uye prompt profional basa rekutengesa;
2. isu tinoshanduka-shanduka pakubata yakagadzirirwa chimiro, rattan, cushion, uye tinokwanisa kupa panguva yakakodzera mifananidzo yevatengi zvinhu kuona kuti kusanzwisisika kusati kwasvitswa;
3. isu tine yedu R & D timu, international bhizinesi timu uye mushure mekutengesa-timu yekusimudzira, kuona pasina njodzi mushure mekutenga;
4. isu tagara tichisimbirira pakuita bhizinesi based pamhando, kuvimba uye kuwirirana. Isu tinovimba nevatengi vedu sevakabatana navo, tinokoshesa hushamwari hwedu, uye tinoedza nepatinogona napo kuvabatsira kuwedzera bhizinesi ravo.
Kutarisira kubvunza kwako uye kugamuchirwa kutishanyira!